CentOS 6.4 ရရှိနိုင်ပါပြီ .. + မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်နည်း။ | Linux မှ
ရရှိနိုင် CentOS 6.4 .. + မည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။
ချစ်တယ် | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
၂၀၁၃ ခုနှစ်မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် CentOS9ဗားရှင်းအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတရားဝင်ကြေငြာချက်နှင့် Desktop (သို့) Laptop စနစ်တွင် CentOS 2013 ကိုမည်သို့မည်ပုံတပ်ဆင်ရမည့်သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။
ရက်အနည်းငယ်အတွင်း CentOS 6.4 ၏ livecd ဗားရှင်းပေါ်လာလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏စနစ် (Equinox theme နှင့် Faenza icon များ) ၏ရုပ်ပုံများကိုကျွန်တော်ချန်ထားပါသည်။
CentOS 6.4 အားအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်တရားဝင်ကြေငြာခြင်း။
မတ်လ ၉ ရက်တွင် Karanbir Singh က 9-bit နှင့် 6.4-bit ဗိသုကာနှစ်မျိုးလုံးအတွက် CentOS 32 ကို CentOS 64 ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ချက်ချင်းကြေငြာခဲ့သည်။
CentOS 6.4 ဆိုသည်မှာ Red Hat သည် Upstream OS Provider မှအများပြည်သူအားလွတ်လပ်စွာထောက်ပံ့ပေးသောရင်းမြစ်များမှဆင်းသက်လာသည့် Enterprise-class Linux Distribution ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စီးရီး၏ ၆.x ဌာနခွဲ၏နောက်ဆုံးထွက်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ပြီးအမှားအယွင်းများ၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များပါ ၀ င်သည်။
သုံးစွဲသူများသည် CentOS 6.3 မှသို့မဟုတ် 6.x ဌာနခွဲရှိအခြားမည်သည့်ထုတ်ကုန်မှမဆိုအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပြီးလိုအပ်သည်မှာ“ yum update” command ကိုဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။
မွမ်းမံမှုများမပြုလုပ်မီ“ yum list updates” ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူများသည် update လုပ်မည့် packet များစာရင်းကိုရနိုင်သည်။ သင်သည် CentOS-6.3 ပေါ်တွင်သင်အမှန်တကယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်“ rpm -q centos-release” ကိုဖွင့ ်၍ ပြန်ပို့သင့်သည်။ “ centos-release-6-3.el5.centos.1”
CentOS-6.4 သည် upstream release EL 6.4 ကိုအခြေခံပြီးမျိုးကွဲအားလုံးထံမှ package များပါ ၀ င်သည်။ upstream repositories အားလုံးသည် end users များနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်တစ်ခုသို့ပေါင်းစပ်ထားသည်။
CentOS 6.4 ၏ပေါ်လွင်ချက်များ:
• Microsoft Hyper-V server တွင် install လုပ်သည့်အခါ CentOS ကို Virtual Machine တစ်ခုအနေဖြင့်ပိုမိုထိရောက်စေရန် Microsoft Hyper-V drivers များကိုထည့်သွင်းထားသည်။
• samba4-libs package မှထောက်ပံ့ပေးသော samba4 စာကြည့်တိုက်များသည် Active Directory (AD) ဒိုမိန်းများနှင့်အပြန်အလှန်အသုံးပြုနိုင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်နောက်ဆုံးပေါ်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် CentOS-6.3 မှ CentOS-6.4 သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးသင် Samba ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်အဆင့်မြှင့်တင်စဉ်အတွင်းပconflictsိပက္ခများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန် samba4 package ကိုဖယ်ထုတ်ရန်သေချာပါစေ။ samba4 သည်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်နည်းပညာအကြိုမြင်ကွင်းဖြစ်သည်။
CentOS-6.3 Release Notes တွင်ကြေငြာထားသည့်အတိုင်း matahari သည်ယခုအခါကန့်ကွက်ခံနေရသည်။ CentOS-6.4 သည်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သော matahari ၏အကြွင်းအကျန်များကိုဖယ်ရှားပေးသင့်သည်။ အကြွင်းအကျန်များအားသေချာစေရန် 6.4 သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် yum erase matahari * ကို run ပါ။
• dev86, iasl နှင့် qemu-guest-agent ကို i386 ၏ဗိသုကာတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာ CentOS ကို ၄ င်း၏ဗားရှင်း 6.x တွင် install လုပ်ထားသူများသည်သူတို့၏ system ကိုမည်သည့်ပြproblemနာမှမလိုဘဲ update လုပ်လိမ့်မည်ဟု :) Series6ထက်နည်းသော CentOS အသုံးပြုသူများသည်ဤသို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။
ယခုငါနှစ်သက်သောအသုံးပြုသူများအတွက် CentOS 6.4 ကို configure လုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဤစနစ်ကို desktop သို့မဟုတ် laptop ပေါ်တွင်အသုံးပြုသည်။
ကျနော်တို့အပို repositories ကိုထည့်သွင်းပါ:
ငါတို့သွားမယ် System »အုပ်ချုပ်ရေး»ဆော့ဝဲထည့်သွင်း၊ ဖယ်ပါ နှင့်အစီအစဉ်ကိုဖွင့်လှစ်တခါကျနော်တို့လိမ့်မည် System »သိုလှောင်ရုံ.
အဲဒီမှာငါတို့သေတ္တာများစစ်ဆေးပါ Base, Contrib, Extras, Plus, မွမ်းမံမှုများ CentOS-6 သာလျှင် ကျန်တဲ့ကျန်တာတွေကိုပြန်မစစ်ဆေးဘဲပိတ်ထားတယ်
ပြီးရင် terminal ကိုဖွင့်ပြီး root နဲ့ update အဖြစ် log in:
ယခုကျွန်ုပ်တို့ java ကိုသွင်းတော့မည်။
add / remove software ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့ ်၍ Java ကို install လုပ်ပြီး openjdk ကိုရှာသည်။ OpenJDK Runtime Environment package (ရရှိနိုင်သည့် ၁.၆ နှင့် ၁.၇ နှစ်ခု) ကိုတပ်ဆင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ icedtea အထုပ်ကိုမှတ်သားသည်။
အခု flash ကို install လုပ်တော့မယ်။
Flash အတွက် Adobe Flash စာမျက်နှာသို့သွားပြီး Linux အတွက် YUM version ကိုရွေးပါ။ ကျနော်တို့ဖွင့်လှစ်နှင့်အတူဆက်လက်နှင့်အလိုအလျှောက် install လုပ်လိမ့်မည်။
repository ကိုထည့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ program တွေထည့် / ဖယ်မယ်။ flash ကိုရှာပြီး Adobe flash ကိုမှတ်ပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် RPMforge repository ကိုထည့်ပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ RPMFusion repositories ကိုထည့်ပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Epel repository ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဗိသုကာနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသော package များကို download လုပ်ပြီးနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် repositories မှ ဦး စားပေးဒရိုင်ဘာကို install လုပ်တော့မည် သင်၏ system ၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အထုပ်ရှိသေး၏ yum-plugin- ဦး စားပေး (သူတို့သည်ထည့်သွင်း / ဖယ်ထုတ်ခြင်းပရိုဂရမ်စင်တာမှတပ်ဆင်ပါ) ။
ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၊ /etc/yum.repos.d/ .repo ကိုပြုပြင်ပြီး ဦး စားပေးများကိုချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။ n သည် ၁ မှ ၉ သို့ ဦး စားပေးရာဖြစ်သည်။
ဦး စားပေး = N ကို
အခြေစိုက်စခန်း, addons, update ကို, extras ... ဦး စားပေး = 1
centosplus, contrib နှင့် Adobe ... ဦး စားပေး = 2
rpmforge, rpmfusion နှင့် epel ကဲ့သို့သောအခြားReposများ ... ဦး စားပေး = 10
ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် root permissions ရှိရမယ်၊ ဒါကြောင့် terminal ကိုဖွင့်ပြီးရေးပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် terminal ကိုထပ်ဖွင့ ်၍ စာရိုက်ခြင်းဖြင့် system ကို update လုပ်နိုင်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ system ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းရန်အခက်အခဲမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ applications များကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
သင်လွဲချော်နိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များ (ပရိုဂရမ်များကိုထည့်ခြင်း / ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းသည်)
File-roller၊ Libreoffice, p7zip, rar, unrar, vlc, brasero, gimp, gcalc, gconf-editor, gnome-utils, gnome-system-monitor, gtk-recordmydesktop, filezilla, alacarte, cups နှင့် system-config-printer
ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ system သည် desktop သို့မဟုတ် laptop ကွန်ပျူတာများတွင်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။
Skype ကိုအလိုရှိသူများအတွက်၎င်း link ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
ပြီးတော့သူတို့မှာ blog.desdekinux.net မှသူငယ်ချင်းများရှိပြီးသား
မင်္ဂလာပါ။ ဤ version ကိုနှစ်သက်ပါ။ မှတ်ချက်ပေးရန်မမေ့ပါနှင့်🙂
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » ရရှိနိုင် CentOS 6.4 .. + မည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။
ဆာဗာများအတွက်အကောင်းဆုံးလည်ပတ်ရေးစနစ် CentOS, SuSE ကိုတောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုပေးပြီး Debian Taliban, ငါအမြဲတမ်း RPM-based distros တွေကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊
သင်၏ဗားရှင်း ၅ နောက်ပိုင်း ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်၊ ကွန်ယက်ဆာဗာများ၊ အတွင်းမေးလ်များ၊ ဝဘ်များအတွက်မရေမတွက်နိုင်သောစီမံကိန်းများတွင်ကျွန်ုပ်၏ရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်အစဉ်အမြဲရှိခဲ့ပြီးယခုနောက်ဆုံးတွင်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Nagios မှကျွန်ုပ်ကိုငွေရှာနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ wifi (ပြောင်းလဲမှုအတွက် Broadcom) နှင့်ပြproblemsနာအချို့ရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲလိုင်စင်များတွင်ငွေစုဆောင်းခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီများပေါ်ထွန်းလာရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည်အချို့သောဆာဗာများတွင် ၅.၈ ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်းအလျင်အမြန် Update လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။
OT: CentOS ဆီကို .. ဟဟဟား .. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာ .. ငါကြိုက်တယ် .. xD
ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်း .. .. ငါကြိုးစားဖို့အချိန်မရသေးဘူး .. မကြာခင်မှာပဲ ..
CentOS ဟာကြီးမားတဲ့ distro တစ်ခုပါ၊ ဒါပေမယ့်ဆာဗာတွေအတွက်ငါ Arch ကိုသုံးတယ်၊ ငါဟာအန္တရာယ်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ
Jorda acosta ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောမှတ်ချက်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့။ 🙂
Jorda Acosta အားပြန်ပြောပါ
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး, CentOS သည်ဆာဗာများအတွက်အလွန်ကောင်းသောဖြန့်ဖြူးသည်။ ငါကဲ့သို့သော versionitis နည်းနည်းရှိသော desktop အသုံးပြုသူအတွက်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်သော်လည်း၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုသည်မဟုတ်။ သံမဏိကဲ့သို့သောတည်ငြိမ်သောတည်ငြိမ်မှုကိုလိုချင်သူနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရှိရန်စိတ်မဝင်စားသူအတွက် CentOS ကိုသင်ကြိုးစားရမည်။
အမှန်တရား .. CentOS သည် Debian ထက် ပို၍ တည်ငြိမ်သည် (အလွန်မြင့်မားသောရည်မှန်းချက်ထားပြီးဖြစ်သည်) ။ CentOS ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်များ၏တည်ငြိမ်ဆုံးဗားရှင်းကိုရွေးပြီးနောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့်ဗားရှင်းများ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည်။ အကယ်၍ အမှန်တရားကိုကျွန်ုပ်ပြောပြပါကကျွန်ုပ်အားဗားရှင်းအမျိုးအစားနှင့်တိတိကျကျပျောက်ကင်းစေပြီး၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုပျော်ရွှင်စေသည် ငါ Debian မှာရှိခဲ့သမျှအရာအားလုံးကို ၁၀ နှစ်ကြာအထောက်အပံ့ပေးတဲ့သင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ repos ထဲမှာတည်ငြိမ်မှု၊ ဆော့ဖ်ဝဲ။ အသုံးပြုသူကဘာထပ်မေးမလဲ။ 🙂
ပြင်းထန်သော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမခံရပါကအသင်းတွင် RedHat ၏စွမ်းအားရှိပြီး၊ RedHat7ထွက်လာပြီးနောက်ထွက်လာမည့်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းရန်ဘုရားသခင်နှင့် developer များကခွင့်ပြုထားသည် Fedora 18 တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည် ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ RHEL / CentOS ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်မှော်ဆန်ပြီး .deb distros တွေကိုပိုနှစ်သက်တယ်လို့ငါပြောနိုင်ပါပြီ။ RHEL7နှင့် CentOS7သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။ သူတို့ကအသေးအဖွဲကိစ္စများကိုယူသွားသည်
ငါ 6.3 ကြိုက်တတ်တဲ့
သင်ကြိုဆိုသည်။ :) တကယ်ကောင်းတယ်🙂
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မကြိုးစားသေးသောအလွန်ကောင်းသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆာဗာများအပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့် (ဤစာစောင်မတိုင်မီ) ပြင်ဆင်ရန်ခက်ခဲသောအယူအဆကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါအဲဒါကိုငါ့လက်ပ်တော့ပ်ထဲမှာထည့်သွင်းချင်တယ်။
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ကြိုးစားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ခဲ့သည်။ ဤ distro ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းသည်ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Debian နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ Debian ကဲ့သို့သင်ဆော့ဝဲအားလုံးကိုသင်၏ repos မှရရှိရန် contrib နှင့် free repos ကိုသက်ဝင်စေရမည် :) CentOS ၏ဖြစ်ရပ်တွင် RposM, Fusion, RPMForge နှင့် Epel တို့ဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီ့နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ software များစွာရှိသည်
ကောင်းသောdနံနက်ခင်းဒီdelinux နှင့်စင်တာများမှစသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွင် centos များတပ်ဆင်ရန် dvd ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုသင့်အားတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
DVD တစ်ခုကိုကူးယူရန်အတွက် Alcohol 120% သို့မဟုတ် Nero အခမဲ့ application ကိုအသုံးပြုပါ။ CD သို့မဟုတ် DVD ပုံရိပ်များကိုကူးယူရန်အခမဲ့ application သည် CDBurnerXP ဖြစ်သည်။
CentOS ရုပ်ပုံကို DVD ပေါ်တွင်မီးရှို့ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ pc ကိုပြန်လည်စတင်။ bios ကိုထည့်ပါ (များသောအားဖြင့်လက်ပ်တော့သို့မဟုတ် pc ပေါ်ရှိ power ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါပေါ်လာသည့်ပထမမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ F2 ခလုတ်) ။ သင် bios သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် "boot" ဟုခေါ်သည့် tab သို့သွားပြီးပထမနေရာရှိ cd / dvd ကိုရွေးပြီးဒုတိယနေရာတွင်သင်၏ hard drive ကိုရွေးပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် bios များကိုသိမ်းဆည်းပြီးပိတ်လိုက်ရုံနှင့် Laptop သည် dvd မှ reboot လုပ်ပြီး boot တက်လိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ။ CentOS 6.4 ကို vmware တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသင်သိလိုပါကဤစာစောင်ကိုလာရောက်လေ့လာရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်တည်ငြိမ်သောတည်နေရာတစ်ခုသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
- Equinox Theme နှင့် Faenza အိုင်ကွန်များကိုတပ်ဆင်ခြင်း
- Deadbeef 0.5.6 တပ်ဆင်ခြင်း (ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးကစားသမား)
- ပင်မ menu နှင့် gnome bar ကို Zorin6သို့ပြောင်းပါ (win7 နှင့်တူသည် - http://www.linuxinsider.com/images/article_images/76180_980x613.jpg)
sudo yum -y install gnome-tweak-tool ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်းများစွာမအောင်မြင်ပါ။
1st - Equinox Theme Installation နှင့် Faenza အိုင်ကွန်များ
ဒီ repo ကို install လုပ်ပါ။ http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/i386/nux-dextop-release-0-2.el6.nux.noarch.rpm
ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့သူက၎င်း၏ ဦး စားပေးပြုပြင်မွမ်းမံ: Priority = 20
ယခု terminal သို့မဟုတ် add / remove application နှင့်အတူ gtk-equinox-engine package ကို install လုပ်ပါ။ Equinox အခင်းအကျင်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်အိုင်ကွန်များကိုထည့်သွင်းထားသည်။
2nd installation deadbeef:
တတိယ menu menu (Gnomedo) ကိုပြောင်းလဲပါ။
မှ source code ကိုကူးယူပါ။ https://launchpad.net/gnomenu/trunk/2.9.1/+download/gnomenu-2.9.1.tar.gz
ဖိုင်ကို unzip လုပ်ပြီး folder တစ်ခုလုံး (ဆိုလိုသည်မှာ gnomenu) ကို / tmp ဖိုင်တွဲသို့ကူးယူပါ
ယခုသင် panel ထဲသို့သင်ထည့်နိုင်သည့်အစိတ်အပိုင်းများအကြားမီနူးရှိသည်။ ဒီ link မှာကွဲပြားခြားနားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ http://gnome-look.org/index.php?xsortmode=high&page=0&xcontentmode=189
CentOS6သည် Gnome2ကိုသုံးပြီး gnome-tweak-tool ကိုရည်ရွယ်သည့်၎င်း၏ shell နှင့် Gnome3ကိုသုံးသောကြောင့်၎င်း package ကိုမရနိုင်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ distro ကိုမစမ်းသပ်ခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ pc ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်မဝံ့သောကြောင့်ဆာဗာများအသုံးပြုခြင်းကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ကြောင်းအမြဲကြားသိခဲ့ရပါသည်။
Epel repos ကောဘယ်လိုလဲ။ ငါသူတို့ fedora ညွှန်ပြကြည့်ရှုပါဘာလို့လဲဆိုတော့
၎င်းတို့သည်မကြာသေးမီက RHEL နှင့် CentOS သို့ Fedora repos ၏ ported applications များဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် Debian Backports :) နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
Screenshots တွေမှာဘယ်လို nautilus မျိုးရှိပါသလဲ။ CentOS 6.4 ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ nautilus သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ရွှင်လန်း!
မင်္ဂလာပါ။ nautilus ဗားရှင်းကိုကြည့်ပါ။ gnome တစ်ခုလုံးသည် 2.28 နှင့်တူသည်။ တစ်ခုတည်းသောအချက်ကငါ Faenza အိုင်ကွန်ဆောင်ပုဒ်နှင့် Equinox ဟုခေါ်သော Gnome ဆောင်ပုဒ်ကိုသုံးသည်။ ထိုနှစ်ခုလုံးကို NUX repo တွင်တွေ့နိုင်သည်။
ထို့အပြင်ငါ Edit -> Properties ကိုသွားခြင်းဖြင့်အပြည့်အဝ nautilus ကိုသက်ဝင်စေပြီး Behavior tab တွင်ဒုတိယ option ကို Open window window တွင်သက်ဝင်စေပါလိမ့်မည်။ 🙂
အလွန်ကောင်းသည်!!! webmin ကိုသုံးရန်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည်ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကပြောပြနိုင်မလား။ (webmin ကိုယ်တိုင် မှလွဲ၍)
ကောင်းသော, Nautilus ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ,2ပြားရှိသည်ဖို့က update လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား?
ဒါ့အပြင် 6bit centos 64 အတွက် Russianfedora repo က 32bit one နဲ့ / and အခြားအရာတစ်ခုခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုနည်းနေတယ်လို့သိမြင်ခဲ့တယ်။
အခုဒီ repo ကနေ skype ကိုသာတိုက်ရိုက် download လုပ်တယ်။ ငါ repo သူ့ဟာသူမထည့်ပါ🙂
ဤ distro သည်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ Debian နှင့်တန်းတူဖြစ်သည် (အစဉ်အမြဲ“ 0” ဗားရှင်းများသည် Ubuntu LTS နှင့်တူညီသည်၊ သို့သော်မူကွဲ ၁၊ ၂ နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောချောမွေ့သည့်အနားများနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောမူကွဲများမှာမူ များသောအားဖြင့် Debian များသောအားဖြင့် fanboys နည်းသည်။ Hosting service အများစုတွင်မူပုံမှန်အားဖြင့် (Debian Stable နှင့်လုပ်သော) kernel version ကိုပြောင်းလဲရန်မဝံ့မရဲ။ Fedora နဲ့သင်လုပ်ခဲ့တာနည်းနည်းလုပ်ပါ Red Hat လုပ်ငန်း Linux ။
Debian နှင့် CentOS နှစ်မျိုးလုံးသည် KISS အတွေးအခေါ်ကိုအာရုံမစိုက်သောအသိုင်းအဝိုင်း distros များဖြစ်သည်။ သို့သော်သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့ကိုသူတို့၏ terminal နှင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးစရာမလိုဘဲသူတို့၏အရသာနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်သူတို့၏ distros များကိုအများဆုံးစွယ်စုံရအောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ GNU / Linux console ကကျွန်တော့်အတွက် Windows အတွက်ပိုလွယ်တယ်။
hello @ petercheco, နှုတ်ခွန်းဆက်သပါသည်။ centos 6.4 သို့ပြန်သွားသည်။ ubuntu မိသားစုမှတစ်ဆင့်လမ်းလျှောက်သွားပြီးနောက်အဆုံးသတ်သမျှသည် buntu သည်ကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့၊ ကျွန်ုပ်မိသားစု၊ ubuntu, kubuntu နှင့်နောက်ဆုံးအရာအားလုံးနှင့်အဆင်မပြေပါ။ lubuntu, သူတို့အလုပ်မလုပ်ချင်ကြဘူး၊ မျက်နှာပြင်ကအေးခဲနေပြီး၊ power cable ကိုဖယ်ရှားပစ်ရတယ်။ linux mint ကို install လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Wi-Fi ကိုမဖွင့်နိုင်ဘူး၊ OpenUS ကို install လုပ်ခွင့်မပြုဘူး၊ yost နှင့် debian ကအမှားတစ်ခုလုပ် မိ၍ မရပါကသူ့ centos သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်မန်နေဂျာလိုတယ်၊ ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်တယ်၊ debbian မှာငါမှာ qbittorrent ရှိခဲ့တယ်၊ Centos မှာငါဘယ်လိုရှာရမလဲမသိဘူးငါနေနေတယ် စင်ကာပူမှာခဏတာငါ opensue ကိုစမ်းချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ခါမှာကိုလံဘီယာနိုင်ငံကအကူအညီနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
CentOS ကိုသင်စိတ်မ ၀ င်စားတဲ့အတွက်သင်ပြန်လာတာကို ၀ မ်းသာပါတယ်။ D. Debian အတွက်တော့ Wheezy version အသစ်ကိုသုံးကြည့်ပါ။ http://www.debian.org/CD/http-ftp/#stable
qbittorrent အထုပ်အတွက်ဒီ repo ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ။
yum qbittorrent install လုပ်ပါ
ငါ iso ကို download လုပ်ချင်သည်။ သို့သော်ပုံ ၂ ခုရှိသည်။ မည်သည့်တစ်ခုကို download လုပ်ရမည်နည်း။ DVD2.iso သို့မဟုတ် DVD1.iso
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Linux ကို၎င်း၏ဘက်စုံသုံးမှုကြောင့်ကြိုက်ပါသည်။ သင့်တွင်အကြံဥာဏ်များရှိပြီး၎င်းတို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုပါကကောင်းသည်။ သို့သော်သင်မလုပ်နိုင်လျှင်ပင်၊ သင်သည်ငတ်ချင်သော်လည်းသင်ယူသည်။ ငါကြိုက်နှစ်သက်သည်မှာမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်သည်။ distros) .Ko စင်တာ Kde desktop ကိုပြောင်းသင့်တယ်၊ ငါအတွက် roll တွေအများကြီးမကြိုက်ဘူး။ gnome 2.8 cre သည်အလွန်အိုမင်းပြီ။ Centos သည် fabor အတွက် desktop ပြောင်းလဲမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောတည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်သည်။
စိတ်မပူပါနဲ့ RHEL7/ CentOS7အသစ်ဟာမကြာခင်ထွက်တော့မှာပါ။ ဒီနှစ်ရဲ့ဒုတိယနှစ်ဝက်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊
64bit rpm ကကျွန်တော့်ကိုပြproblemsနာဖြစ်စေတယ်။ ငါ 32 ကိုထည့်သွင်းရတယ်။ ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲသိလား နှင့် / သို့မဟုတ် 64bits အစား application များကို 32bits ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ရန်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
32 bit OS os ကိုသင်မတပ်ဆင်ခဲ့ဘူးလား။
😮စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ် 64-bit version ကို install လုပ်လိုက်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်၊ အမှန်တကယ် 6.4-bit ဖြစ်သောသင်ကျန်ခဲ့သော iso ကို download လုပ်သောအခါ version (32) မှရှုပ်ထွေးသည်။
တကယ်တော့ 64-bit isos သည်ဒီမှာရှိသည်။
မေးခွန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်တော် Linux ubuntu အကြောင်းသိပ်မသိသောကြောင့် ubuntu နှင့်စတင်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော် CentOS 6.3 system သည် CUPS ၏ဗားရှင်း 1.6.3 ကို install လုပ်ရန်ခွင့်ပြုမရသိလိုပါသလား။
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကူးယူပြီးပါပြီ၊ သို့သော် CentOS က၎င်းကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းပြောပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၄ င်းကို yum -y intall cups များပေးခြင်းအားဖြင့် ၁.၄.၂ ဗားရှင်းကို install လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။
Hello desktop insole ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်တတ်ကြောင်းပြောပါ၊
3 ကို5ပြောင်းပါ
ထိုအခါ [ESC]: wq! နှင့် [ENTER]
ထို့နောက်သင် reboot လုပ်ပြီး၎င်းသည် graph mode ကိုအလိုအလျောက် load လုပ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် LINUX / CENTOS သို့အသစ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် XRDP ကိုဝေးလံခေါင်သီသော desktop ကိုဖွင့ ်၍ အလုပ်လုပ်ရန်စီမံပြီးပါပြီ၊ သို့သော်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကို CENTOS 6.4 တွင်ရှာရန်မည်မျှခက်ခဲပါသနည်း။ ငါ teamviewer ကို install ချင်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးစတင်ခဲ့ပေမယ့် session တစ်ခုဖွင့်တဲ့အခါမှသာအဝေးကနေဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖွဲ့ကဒီအဖွဲ့ကို online မှာအမှတ်အသားမပြုခဲ့ပေမဲ့ဆက်ဆက်သွယ်နေတုန်း ... ငါ centos ရဲ့ login မျက်နှာပြင်ကိုဘယ်တော့မှဆက်သွယ်လို့မရဘူး၊ centos login မျက်နှာပြင်ကိုဝင်ရောက်ရန် teamviewer ကိုသုံးနိုင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် WAN ကနေတစ်ဆင့် Centos ကိုဆက်သွယ်ပြီး log လုပ်ခွင့်ပြုတဲ့အခြား software အချို့လား။ ငါသည်လည်း GDm အရကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ MariaDB အတွက်စပျစ်သီးပြွတ်နှင့် HA proxy တစ်ခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်နှင့် node များသည်ဝေးလံသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုချင်းစီတွင်သီးခြားအင်တာနက်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ဖို့၊ ပြုပြင်တာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုရင်အဝေးကနေဆက်သွယ်ဖို့လိုတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်သည်သင့်အား Remmina ကို Russian Fedora repository တွင်သုံးရန်အကြံပြုပါသည်။
ထည့်ပြီးတာနဲ့ add / remove programs center မှ Remmina package ကိုသာ install လုပ်လိုက်ပါ။
ကောင်းပြီစမ်းကြည့်စမ်း၊ ငါ့အဓိက OS လားအလုပ်လုပ်လား
ကျွန်ုပ်သည်ဤအကြောင်းအရာများအတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်သောကြောင့် Edubuntu မှထွက်ခွာလာသည်နှင့်အမျှ Centos6ကိုမကြာခင်ကကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည်။ ပြissueနာမှာကျွန်ုပ်၏ hard drive များကိုမည်သို့မှတ်မိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါကအောက်ပါသတင်းစကားရရှိသည်။ အမှား mounting : mount: အမည်မသိဖိုင်ဖိုင်စနစ် 'ntfs'၊ သင့်အာရုံစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
wget သည် http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm
yum ကို -y ဖျူးဖျူး -nfs-3g install လုပ်ပါ
ယခုသင်သည်သင်၏ NTFS hard drive ကို mount လုပ်နိုင်သည်။
(၎င်းသည်ဥပမာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ sdb1 အစားသင်၏ယူနစ်နှင့်ကိုက်ညီသောအရာကိုထည့်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် epel repository တွင် gparted ဖြင့်ကြည့်နိုင်သည်။ )
repo epel ကို install လုပ်ရန်အောက်ပါအချက်များကိုလိုက်နာပါ။
(သင်၏ root စကားဝှက်)
wget သည် http://ftp.linux.cz/pub/linux/fedora/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
yum သည် epel-release-6-8.noarch.rpm ကိုထည့်သွင်းပါ
yum gparted install လုပ်ပါ
CentOS 12 တွင် "Amber 6.4" ပရိုဂရမ်ကိုသင် install လုပ်ဖူးပါသလား။ ၎င်းသည်ဓာတုဗေဒပျော့ပျောင်းသည်
ဒီ repo ကသင့်ကိုကူညီနိုင်ပေမယ့်ဒီ program ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဘယ်တော့မှသုံးမှာမဟုတ်ဘူး -
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ... ၎င်းကိုကျွန်ုပ် install လုပ်မည်။ ကျွန်ုပ် iso liveCd သို့မဟုတ် LiveDVD ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်။ ????? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟယ်လို…။ ကောင်းသောည .. CentOS-6.4-x86_64-LiveDVD.iso နှင့် CentOS-6.4-x86_64-bin-DVD1.iso အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ၊ ပထမ ၁.၈ GB နှင့်အခြား ၄ GB ထက်ပိုသည်။ ဒီ distro ကိုအိမ်သုံးအတွက်စမ်းသပ်ချင်ပါတယ် မည်သည့် iso နှစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ပိုမိုသင့်တော်ပြီး LiveCD (1.8 MB)?
မင်္ဂလာပါ။ လိုအပ်သောအရာများကိုရေးသားထားသော livecd ကိုသာ download လုပ်သင့်သည်။ အောက်ကလင့်ခ်ကိုသုံးပါ။
ဂျင်း Carlos acevedo gavidia ဟုသူကပြောသည်
desdelinux မှမင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုမေးချင်ပါတယ်။ Centos ကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ပြန်ဆိုလို့ရလား။ တကယ်လို့မင်းလုပ်နိုင်ရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးအမှန်တရားကငါရှာဖွေပြီးရှာဖွေတယ်၊ ​​အဲဒါကိုစပိန်ဘာသာဆီဘယ်လိုပို့ရမယ်ဆိုတာငါဘယ်နေရာမှာရှာမတွေ့ဘူး။ မည်မျှရိုးရှင်းပြီးမြန်ဆန်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ထိုင်ရန်ကြိုက်အောင်ကူညီပါ။
jean carlos acevedo gavidia သို့ပြန်သွားပါ
open terminal နဲ့ရိုက်ပါ။
သင်၏ root password ကိုရိုက်ထည့်ပါ
yum ကို system-config-language ကို install လုပ်ပါ
system-config ကို - ဘာသာစကား
သင်၏ဘာသာစကားရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီးသင့် system ကိုပြန်လည်စတင်ပါ။ 😀
desdelinux မှသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုမေးချင်ပါတယ်။ Centos ကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ပြန်ဆိုလို့ရလား။ တကယ်လို့မင်းလုပ်နိုင်ရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးအမှန်တရားကငါရှာဖွေပြီးရှာဖွေတယ်၊ ​​အဲဒါကိုစပိန်ဘာသာဆီဘယ်လိုပို့ရမယ်ဆိုတာငါဘယ်နေရာမှာရှာမတွေ့ဘူး။ မည်မျှရိုးရှင်းပြီးမြန်ဆန်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ထိုင်ရန်နှစ်သက်အောင်ကူညီပေးပါ။
Script bash: SD မှကွန်ပျူတာသို့ပုံအသစ်များကိုကူးယူပါ